Chatroulette - Zephondo njenge Incoko jikelele
Chatroulette – Zephondo njenge Incoko jikelele
ChatRoulette yi free kodwa kufuna ubhaliso kwi-i-umzamo bayigcine le-intanethi ividiyo incoko site coca. Ukuba ungathanda ukuba ahlangane entsha zihlobo, ingaba ikhangela fun, okanye ufuna ukuba unayo i-intanethi umhla, le yindlela elungileyo ndawo ukuqala. Ngexesha lethu uvavanyo, kwakukho malunga abasebenzisi-intanethi, ngokunxulumene site. ChatRoulette yi free kodwa kufuna ubhaliso kwi-i-umzamo bayigcine le-intanethi ividiyo incoko site coca. Ukuba ungathanda ukuba ahlangane entsha zihlobo, ingaba ikhangela fun, okanye ufuna ukuba unayo i-intanethi umhla, le yindlela elungileyo ndawo ukuqala. Ngexesha lethu uvavanyo, kwakukho malunga abasebenzisi-intanethi, ngokunxulumene site. Andrey, isirussian yesikolo esiphakamileyo lwabafundi, wadala kuqala kwi-intanethi jikelele ividiyo incoko iwebhusayithi: ChatRoulette. Kwi ezimbalwa kwiiveki kule ndawo wathabatha ngaphandle njenge rocket kwaye waba kakhulu ethandwa kakhulu ndawo kuba abantu beka phantsi ngaphandle kwi-intanethi. Oku popularity iphenjelelwe ilanlekile ka-clones kwaye izinto ezizezinye njenge Omegle, Incoko Jikelele, Ividiyo Incoko kwaye Ividiyo Dating. Ingcamango ka-ChatRoulette ngu njengoko elula njengoko kunjalo brilliant. Kwiwebhusayithi ikuvumela ukuba ingaba i-one-kwi-omnye webcam ezisekelwe incoko kunye a random umntu ukusuka zonke phezu kwehlabathi. Nangaliphi na mzuzu, wena okanye stranger uvumelekile ukuba idityanisiwe kunye, unako shiya incoko qala omtsha unxulumano kunye omtsha jikelele stranger. Kwiminyaka edlulileyo ChatRoulette struggled ukugcina site coca kwaye ukugcina ze abantu (ikakhulu abantu) ngaphandle. Zonke iintlobo ezininzi ezonakeleyo amanyathelo baba balingwe kodwa ngoku ChatRoulette ikhangeleka kuba sticking kunye ubhaliso isisombululo. Oku kuthetha ukuba awukwazi kuba i-okungaziwayo jikelele ividiyo incoko ngaphandle nokubhalisa kwi-site. Okokuqala kufuneka unyuso incoko roulette kuwe imelwe nge inani imithetho, imimiselo kunye izilumkiso kwi engundoqo iphepha. Awuvumelekanga ukuba usasazo nudity okanye offending isiqulatho kwaye kufuneka abe phezu. Kubalulekile kananjalo akuvumelekanga ukuba usasazo spam okanye iibhonasi a webcam. Ngokusebenzisa ChatRoulette-intanethi incoko inkonzo uyavuma ukuba balandele imigaqo kwaye ChatRoulette unelungelo block kwaye ban ufuna ukuba wena musa balandele imigaqo. Ekugqibeleni, kukho isilumkiso ukuba webcam kudla ufuna yosasazo kusenokuba wabhala ngabanye ngoko ke jonga ngaphandle kuba scammers. Uyakwazi cofa i – ‘ungene’ qhosha kwi-main menu le Omegle okungokunye log-in ukuba ingaba sele ebhalisiweyo okanye ujoyinela free ukuba ungummi elitsha. Ukubonelela yakho ye-imeyile, i-imeyili kwaye i-password wavuma phezulu. Uza kufumana isiqinisekiso-imeyili kwaye kufuneka cofa unxulumano kuyo ukuze uqinisekise yakho yobhaliso. Xa kufuneka benze oko, uyakwazi log-in kwaye qala yakho jikelele kwi-intanethi ividiyo incoko adventure kwi ChatRoulette. Eyona amaqhosha kwi phezulu menu kukho ‘uqalo’, ‘yeka’ kwaye ‘ingxelo kwaye elandelayo’ amaqhosha. Zonke ezi amaqhosha kuba elinqumlayo ikhowudi ngoko uyakwazi elandelayo umntu ngaphandle touching mouse. Zonke iinkcukacha ngabo okuvimba ‘imboniselo yabucala kwaye izicwangciso’ indawo yolawulo. Apha ungacwangcisa al uhlobo iinketho njenge webcam kwaye isandisi-sandi izinto ezikhethekayo ze-e – ‘enesandi kwaye ividiyo’ candelo. Igalelo igama lakho, ubudala, isini, indawo yakho ulwimi(s) kwaye inkcazo emfutshane malunga ngokwakho kwi – ‘Ulwazi’ tab. Zichaza yakho ezithandwa kakhulu umculo, iimifanekiso kwaye imidlalo kwi – ‘Tastes’ tab. Misela ezinye izinto ezikhethekayo ze-njani ungathanda elandelayo abantu ‘Elandelayo’ candelo. Khetha ukuba ungathanda ukuba badibane nabantu kunye kuphela webcams kwaye khetha ukuba ungathanda ukuba aqhagamshelane ne-bolunye uhlanga ukusuka kwindawo ethile amazwe “Search” yolawulo.
Uyakwazi nkqu layisha phezulu abanye iifoto kwi – ‘Iifoto’ icandelo ukubonisa kwabo endaweni yakho webcam kutya.
ChatRoulette kanjalo ubani ‘Premium’ khetho
Kunye Premium khetho owenziwe, uyakwazi ukuthenga tokens ukuba izakunika ezingaphezulu imisebenzi. Umzekelo, ungakhetha ngokwesini abantu uxhulumeneyo nge ukuba unengxaki Premium-akhawunti. I-intanethi jikelele incoko amava kwi ChatRoulette kubaluleke kakhulu. Kufuneka nje, betha, ‘uqalo’ iqhosha kwaye uxhulumeneyo kunye a random stranger ukusuka jikelele ehlabathini. Ukuba ufuna musa na umntu uxhulumeneyo okanye ufumane okruqukileyo, kufuneka nje, betha, ‘Elilandelayo’ iqhosha. Oko sele kuba wathi ukuba Incoko Roulette exesi ukugcina site coca ahlawule ngaphandle. Ixesha elininzi uxhulumeneyo kunye decent abantu abo nje ndifuna wonwabe okanye mnandi incoko. Kanye kwisithuba ngexesha uza kufumana zidityanisiwe umntu ebonisa explicit ngesondo ukuziphatha kodwa ukuba ufuna musa ngolohlobo, uyakwazi nje nqakraza ‘Ingxelo kwaye elandelayo’ iqhosha. Emva ezimbalwa imizuzu kwiwebhusayithi, kuza kufuneka uqinisekise yakho ubhaliso ngo ukuzalisa ngaphandle yakho inombolo yefowuni. Ufuna ke uthumele umyalezo obhaliweyo nge liqinisekise ikhowudi ukuba kufuneka ufake kwiwebhusayithi. Oku seemed na pretty rigorous umzamo bhalisa bonke abasebenzisi kwaye akakwazi kwenza i-site ukuze okungaziwayo simemo kwakhona. A mnandi playful msebenzi ukuba ChatRoulette yongezelela site ingaba uzoba khetho.
Endaweni bhala umbhalo unako kanjalo zoba engundoqo incoko window
Eneneni, stranger usebenzisa i-seed engenamkhethe zidityanisiwe ayenze efanayo ngoko ke ungakwazi ukusebenza kunye ukwenza sentsebenziswano enye ka-aph.
Okanye nje uyonwabele kwaye kuba laugh kunye
ChatRoulette yi mnandi kwaye ubukhulu becala coca jikelele ividiyo incoko site ukuqala incoko yakho ekwi-intanethi adventures. Kodwa yokuba kufuneka bhalisa siya kugcina abanye abantu ekusebenziseni i-site. Ekubeni-kwakhona qinisekisa kuwe ubhaliso ngo umyalezo obhaliweyo ikhangeleka exaggerated kwaye ndiya ngokuqinisekileyo scare ilanlekile ka-abasebenzisi ekusebenziseni le ngenye indlela kakuhle i-intanethi jikelele incoko inkonzo
← Dating ukuba zithungelana kuba free
Web unxibelelwano →